Top 10 Amathiphu Easy Ukuze zemininingwane Riding Smart Yonke indawo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Top 10 Amathiphu Easy Ukuze zemininingwane Riding Smart Yonke indawo
Ukuhamba ngesitimela kungaba enye yezindlela okuphumuzayo kakhulu futhi kujabulise ukuhambahamba. Udinga ukwazi indlela yokwenza okungcono kakhulu uhambo lwakho futhi hlakanipha. Ukuba sihleleke kakhulu futhi sinezingxenye ukwazi yini ukuthi iya elide ekwenzeni isitimela sakho uhambo a ukugqamisa ngamalanga wakho wamaholideyi noma adventure. Sibheke lezi Top 10 Amathiphu lula zemininingwane Riding Smart. Zilungiselele for uhambo lwakho olandelayo.
Top 10 Amathiphu lula zemininingwane Riding Smart – ISU ONE: Thenga Ticket lakho Ngo Advance
Top 1 Top 10 Amathiphu lula zemininingwane Riding Smart, Qiniseka ukuhlela uhambo lwakho futhi ukuthenga amathikithi akho isitimela kusengaphambili ukuze uqinisekise ukuthi uthola phezu izitimela ufuna. Qiniseka ukubuza mayelana nanoma yisiphi Okukhethekile noma izaphulelo ezingase zingatholakali kuwe. Ongamthandi kulondolozwa enye imali! Uzokwazi ukuba londoloza imadlana ongasichitha ku kwezinye izingxenye uhambo lwakho.
Owesifazane esiteshini sesitimela
ISU TWO: Stow Impahla yakho
The best Easy Amathiphu zemininingwane wukuthi Awunayo njalo kudingeka uhlole izikhwama futhi uma we usayizi ezinengqondo ungase futhi ukhethe ukugcina kwabo yokubeka ngaphezu kwesihlalo noma nhlonhlo kubo endaweni esingunxantathu phakathi izihlalo emuva kuya emuva. Ngale ndlela unayo izikhwama zakho eduze kwakho ngaso sonke isikhathi.
ISU EZINTATHU: Yiba Smart Nge Izikhwama Yakho
Asifuni ethi zonke isitimela isela ukulungele ehlele e-ithuba lokuqala bathola, kodwa kunalokho phezu ohlangothini oluphephile. Qaphela uma kuziwa izikhwama zakho. Gcina kubo ukuqonda kunokuba ekupheleni imoto isitimela. Uma une ubhaka ungase futhi clip ezizibeni yakho kuya ebhasikidini umthwalo ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe esengeziwe.
ISU EZINE: Thola Isihlalo sakho
Uma usebenzise amathiphu ethu Easy okwedlule zemininingwane travel futhi ube agodliwe isihlalo nonke ihlelwa. Ungaya ngqo endaweni yakho. Uma kungenjalo, wamukelekile ukumangalela noma iyiphi esihlalweni ngokungazigodli. Uma kukhona hhayi eziningi zalezi etholakalayo, uhlole amamaki ukubhuka othumele ngaphezu kwezihlalo noma iminyango gumbi. Omaka ukukhombisa elula uhambo ukuthi isihlalo is zibhalise for. Zibonisa nokuthi uma kokwehla ngaphambi umnikazi ngisho wakhwela ukhululekile ukuthatha ukuthi isihlalo.
ISU EZINHLANU: Sebenzisa zemininingwane Ngokuhlakanipha Isikhathi
Thatha ithuba ukusebenzisa isikhathi esichithwa ohambweni isitimela ukuze ngokwakho ihlelwe. Ungahlela I-uya khona eduze. Sebentisa lesikhatsi kwenta loku funda incwadi yeziqondiso zakho, hlola iziqondiso eya endaweni yakho esilandelayo. Dlula izithombe zakho, ukuhlela yakho ubhaka, uphinde uhlole uxhumo lwakho noma ukuqedela yimuphi omunye imisebenzi udinga ukuba ngenkathi unesikhathi. Uma uhambo lwakho mude lokhu futhi ithuba nice ukuthatha kwezinye izinto.
ILonon Airport ukuya eNice ngesitimela
ISU SESITHUPHA: Sebenzisa I Izindlu On The Train
Ukugcina kokubili isikhathi nemali uzame futhi usebenzise lesi Amathiphu Easy zemininingwane bese usebenzisa zangasese esitimeleni njengoba kuqhathaniswa usebenzisa labo esiteshini. Zangasese isitimela ngokuvamile zitholakala ekupheleni izimoto futhi ngokuvamile ihlanzeke kakhulu kunalokhu zangasese eziteshini, kanye nokuba khulula.
ISU SESIKHOMBISA: Talk to Locals and Other Travelers
Ithiphu 7 aphume eziphezulu yethu 10 Amathiphu lula zemininingwane Riding Smart, Iyiphi indlela engcono ukuze ufunde mayelana idolobha noma izwe kuka ngokukhuluma ezinye yayo bendawo, noma nezinye izihambi okungenzeka endaweni uya? Bazokwazi ukukutshela ins kanye nasemigwaqweni of yakho uya khona futhi ukweluleka wena zalokho okufanele uyenze nongafanele ukwenza. Zama kokuhlephula ice ngokubuza umbuzo, Unikela ngokushisela into sweet noma ukubonisa kusukela langakini.
ISU SESISHIYAGALOMBILI: Phathani Umthamo
Okuhambayo kungumsebenzi elambile futhi ungase ufune ukupakisha okuthile isidlo uma wena esitimeleni. Ungakwazi Thenga kakhulu ukudla kwakho okuthandayo at kwesitolo sendawo noma deli noma uvakashele iwayini sela ngaphambi hop isitimela; kakhulu zezitimela okungenani oyedwa kulaba. I ukudla okunikelwe ezitimeleni ngokuvamile eliphuphile ezibizayo ngaphandle uma ukhokhela isihlalo unqambothi.
ISU SESISHIYAGALOLUNYE: Yazi kuphi To Get Off
Ukwazi bonyana ngiyiphi esiteshini ingenye kubalulekile Amathiphu Easy zemininingwane travel. Lapho ufika edolobheni ungase bayeke eziteshini eziningana suburban ngezibonakaliso ezibonisa igama uya khona futhi igama endaweni, kodwa musa hop off uze ufike esiteshini central. Ungahlala ukubuza abanye abagibeli noma uhlole incwadi yakho ukuthola usizo olwengeziwe.
ISU EZIYISHUMI: Khumbula ngaso sonke isikhathi Local zemininingwane Ukuziphatha
Phawula indlela abanye abagibeli emotweni yakho isitimela baziphethe. Uma ithule, qiniseka ziyalandela. Watch out for izimpawu ukuthi kungase kubonise ukuthi uhleli esikhethiweyo imoto ethule lapho abantu beze ukulala noma umsebenzi. Kungakhathaliseki lapho uhleli, zama ukuba umuntu loudest eduze. Qinisekisa sokungabeki izinyawo zenu ezintanyeni esihlalweni ngaphesheya nawe, ngaphandle kokuthi unayo izicathulo zakho ukuvala.
Uma ukhumbula la Phezulu 10 Amathiphu lula zemininingwane Riding Smart thina isiqiniseko wena super uhambo futhi okuhlangenwe nakho okukhulu jikelele. Ngezinye izikhathi ungase uhlangane ngisho ezinye bendawo entsha bese abangane abasha! Noma kungenzeka uma kuziwa ukuqeqeshwa travel. Uma uke yingcweti lezi, ucabangele Bernina Express futhi nokuningi!
– Uma ayethanda wena okuthunyelwe zethu Top 10 Amathiphu lula zemininingwane Riding Smart, bazizwa bekhululekile ukuxoxa, sifika izinkinobho ngokwabelana ngezansi nje lokhu post blog.
Ukulungele ukugibela isitimela? Bhuka esihlalweni sakho futhi musa ukukhokha noma yiziphi izimali yokubhuka ngesikhathi – www.saveatrain.com
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-10-easy-tips-for-train-riding-smart%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / yona / de noma / ru futhi ngezilimi ezingaphezu.
amathiphu ithiphu yesitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi